Kudya Sachigaro, Sofa, Kudya tafura, Chipurasitiki Sachigaro, Pu Sachigaro - Forman
Tianjin Forman Furniture inotungamira fekitori pakati kuchamhembe kweChina iyo yakasimbiswa muna 1988 ichinyanya kupa zvigaro zvekudyira nematafura.
Kugoverwa kwemusika kuri 40% muEurope, 30% muUSA, 15% muSouth America, 10% muAsia, 5% mune dzimwe nyika.
Forman ine hombe yekutengesa timu ine vanopfuura gumi vehunyanzvi vatengesi, vachibatanidza online uye kunze kwekutengesa nzira, uye inogara ichiratidza ..
Dhizaini ndiwo Mweya wePurasitiki Sachigaro. Iyo chigaro chakagadzirwa neyepakutanga nharaunda-inoshamwaridzika polypropylene zvinhu. Sachigaro uyu unowanzo kuve wekunze-kushandiswa, zvakare kunogona kuve kwekunze-kushandiswa uine unti-UV zvinhu uye yekunze poda kupfeka. Sezvo kuchinjika chiri chimiro chePP mapurasitiki, iwe uchaona zviri nyore kwazvo kugara.
Chigaro chekudyira chakafuridzirwa nepasi pacharo, ichi chigaro chakaita sebazi chinowedzera chinhu chekudzikama kwakaomarara kune chero nzvimbo. Chigaro chayo chakasimba chepurasitiki chakaumbwa chinogadzira mucheka dhizaini yemhepo yemazuva ano inotonhorera, yakakwana kukicheni, hofisi, kana patio.
Sachigaro Yakagadzirwa kubva pasimbi nehuni, furemu yayo mapaundi akakomberedzwa makumbo akabatanidzwa necrisscrossing zvitsigiso nemakumbo akapoteredzwa. Chigaro chepurasitiki chebhakiti chinosunga zvese pamwe chete, kuratidza hue yakasimba. Iyo yekugara ruoko inogadzirwa neyekutanga nharaunda-inoshamwaridzika polypropylene zvinhu zvakafukidzwa nejira. Sezvo kuchinjika chiri chimiro chePP mapurasitiki, iwe uchaona zviri nyore kwazvo kugara.
Kid Chairs, Chidiki Sachigaro 1618-vana #
Iyo seti yemazuva ano inowedzera kukwezva kwekuyevedza kunzvimbo yekugara yemwana wako.Ergonomic cheya ine rakakombama kumashure dhizaini kunyatsoita zvakanaka.Chigaro chakagadzirwa neyekutanga nharaunda-inoshamwaridzika polypropylene zvinhu uye makumbo akagadzirwa neakasimba huni fureni Sezvo inochinjika ndiyo ficha yeiyo PP mapurasitiki, iwe unozoona wakasununguka kugara.
Iyi tafura yekudyira chinhu cheuunganidzi chine mashandisirwo akasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana, kungave kumba kana muhofisi, kunyangwe kunze. Inopa yakawanda nzvimbo yenzvimbo yekofi uye nguva yetii, kuverenga kwemasikati, kushanda, kuratidza yako vase yaunofarira uye zvirimwa, uye nekuisa parutivi rako rekuremara kure.
Hasha girazi pamusoro pemoto dombo pamusoro pemabhura dini ...
Tafura yemarble inoenderana nemhuri diki nekuti ivo vanokwanisa kupokana nemutemo unoshanda, kwete nyore kuratidzwa kune tsvina uye hapana mvura inogona kukanganisa tafura sehuni. Iyo tafura yekudya chando-tafura iri nyore nekristaro chimiro chebwe uye mukuita, tafura yakabwinyiswa uye inoshandiswa kuvhara basa rekurwisa hutachiona, kuchenesa nekukurumidza kupfuura nakare kose. Tafura yekuchenesa ndiyo tafura yakagadzirirwa mabasa akawanda, anogona kunge ari tafura, tafura yetii kana tafura, Kuti uunze kushandiswa ...
Kudya tafura T-15
Tafura yepamusoro yekudyira yepamusoro yakagadzirirwa mhuri diki ichapa imba yako chimiro chekare. Izvi zvaingoita kuti tafura yekudyira inogona kubata kusvika kumunhu-munhu nekuda kweiyo diki dhizaini asi izvo ndizvo zvinoita kuti ive yakasarudzika uye chaiyo yekudhonza maziso. Tafura yekutenderera inounza vanhu padhuze saka usarasikirwa nemukana wekushandisa dzakanyanya kunakisa nguva nemhuri kana shamwari. Yakagadzirwa ne MDF yakasimba uye yakayambuka makumbo esimbi nemapads pasi peumwe neumwe kudzivirira yako pasi kubva mukukwaya, unogona ...
Tafura yekudyira T-15L
T-15L: yakakomberedzwa micheto chengetedzo dziviriro, MDF yakasimba desktop zvinhu, yakashongedzwa dhizaini.
Chipurasitiki Sachigaro 1666-vana #
Dhizaini ndiwo Mweya wePurasitiki Sachigaro. Iyo chigaro chakagadzirwa neyepakutanga nharaunda-inoshamwaridzika polypropylene zvinhu, simbi yegumbo furemu inogona kuve yakaputirwa upfu kana huni kutamiswa. Sachigaro uyu unowanzo kuve wekunze-kushandiswa, zvakare kunogona kuve kwekunze-kushandiswa uine unti-UV zvinhu uye yekunze poda kupfeka. Sezvo kuchinjika chiri chimiro chePP mapurasitiki, iwe uchaona zviri nyore kwazvo kugara.
Plastiki Sachigaro - F803 #
Plastiki cheya-BV #
Kana iri cheya yepurasitiki, chese KD chimiro ndiyo yakajeka nzvimbo, diki kwazvo pasuru iyo inokodzera kutengeswa kwepamhepo. Chigaro chakagadzirwa nezvose zvakatipoteredza nharaunda-zvine hunyanzvi polypropylene zvinhu, zvine yayo yepakutanga, yakashongedzwa dhizaini, iyo isingakwanise kuenda isingazivikanwe uye sarudzo dzemavara kune ako mareferenzi.
Plastiki Bar Sachigaro- 1780 #
Dhizaini ndiwo Mweya wePurasitiki Sachigaro. Chigaro chebhari chakagadzirwa nezvakazara epakutanga nharaunda-inoshamwaridzika polypropylene zvinhu. Mifananidzo yakasarudzika yesarudzo dzako. Ichi chigaro chebhawa chinowanzo kuve chemukati-kushandiswa, zvakare chinogona kuve chekunze-kushandiswa. Sezvo kuchinjika chiri chimiro chePP mapurasitiki, iwe uchaona zviri nyore kwazvo kugara.
Chipurasitiki Sachigaro 1681 #
Pasofa F813 #
Forman inotungamira fekitori iyo inogara ichitarisisa pamavambo ekugadzira. Kunyanya kurudzira iyi sofa seti, yakasununguka kugara kana kurara pamushini wakapfava. Yakasanganiswa nemutsago nePP mapurasitiki, izere nefashoni pfungwa uye yakasimba zvakakwana kuti itsigire anosvika 150kgs mutoro. Unogona kuiisa mumba yekutandarira kuti unakirwe nehupenyu hwako hunoshamisa! chero ruvara rwuripo, kumirira kubvunza kwako!
Plastic Kudya Chairs Shelly #
Dhizaini ndiwo Mweya wePurasitiki Sachigaro. Sezvo kuchinjika chiri chimiro chePP mapurasitiki, iwe unozoona yakasununguka kwazvo kugara.i inonakidza uye yemazuva ano yekudyira padivi cheya inorumbidza zvese zviri mukati nekunze nzvimbo dzekudyira. Yakagadzirwa neyemahara-inoyerera minimalistic dhizaini, inosanganisa zvinhu zvekutanga zvemazuvano dhizaini ine rupo saizi chigaro uye zvine hungwaru yakamisikidzwa backrest yeakanakisa mamiriro. inonyatso kurongeka, inouya yakaungana zvizere, uye yakashongedzwa neisina-m ...
Wholesale Multi-nzvimbo kuwanikwa epurasitiki chai ...
Tine ruzivo mugadziri. Kumanikidza ruzhinji rwezvakakosha zvitupa pamusika wayo weFekitori Zvakananga kupa China Side Chair Mode ...
Maresitoreti eDenver anogadzira zvekunze ne ...
Nhasi kune nzira dzakawanda dzekushongedza imba ine zvekunze fanicha yeakasarudzika dhizaini. Kunyangwe iwe uchida yeAsia kana Western yekushongedza, iwe unogona kunge uri ...